စက်မှုဇုန် လုပ်သား ၁၃ဝဝ ကျော်ကို နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ပေးအပ် - Yangon Media Group
စက်မှုဇုန် လုပ်သား ၁၃ဝဝ ကျော်ကို နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ပေးအပ်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂ဝ
ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် စက်မှုဇုန်များမှ လုပ်သား ၁၃ဝဝ ကျော်ကိုအလုပ် သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးက နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြားများပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ကတ်ပြားထုတ်ပေးခြင်း ကို စက်တင်ဘာ ၈ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်အထိ နှစ်လတာသတ်မှတ် ၍ လဝက ဝန်ကြီးဌာနက ဆောင် ရွက်နေကြောင်း၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင် အတွင်းရှိ ရွှေပြည်သာ၊ အင်းစိန်၊ လှိုင်သာယာ၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ လှည်းကူး နှင့်တိုက်ကြီး စက်မှုဇုန်တို့မှ လုပ် သား ၁၃၈၉ ဦးကို လုပ်ငန်းခွင်မ ပျက်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား များပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေက ပြုလုပ်ပြီး ကတ်ပြားများကို လုပ်သားများထံ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”အလုပ်သမားအချို့မှာ သူတို့ ရဲ့ နိုင်ငံသားအရည်အချင်းနဲ့ကိုက် ညီတဲ့ကတ်ပြားမရှိတဲ့အတွက် လူမှု ဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်တွေ၊ ကျန်း မာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခွင့်အရေး တွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အပြင် ဒီကတ်ပြား မရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားကိုတရား ဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အ လမ်းတွေဆုံးရှုံးနေတာကိုတွေ့နေရ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေမှာအ လုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်သမား တွေအနက်က နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားမရှိတဲ့သူတွေကို သူတို့ ကိုင်ဆောင်သင့်တဲ့ ကတ်ပြားတစ် မျိုးမျိုးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်သစ္စာ စီမံချက်နဲ့စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးဦးသိန်းဆွေကပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ၁၄ မြို့နယ်ရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ၃ဝ၈၁ ခုတွင် လုပ် သားဦးရေလေးသိန်းခန့်ရှိသည့် အနက် ရှစ်ထောင်ခန့်သည် နိုင်ငံ သားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိကြောင်း သိရသဖြင့် ယင်းလုပ်သားများအား စက်တင်ဘာ ၈ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်အထိ နှစ်လတာသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းခွင်မပျက်ကွင်းဆင်းဆောင် ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၆ ရက်ကလည်း ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်စက်မှုဇုန် များမှ လုပ်သား ၁၂ဝဝ ခန့်ကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပေးအပ်ပွဲသို့ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ရခိုင်တိုင်း ရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော် အေးမောင်၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ် သမားများတက်ရောက်ခဲ့သည်။
စပါး မဟုတ်သည့် အခြားသီးနှံများအတွက် ယခင်ထက် နှစ်ဆတိုးမြှင့် ငွေချေးမည်
ရွှေဘိုတွင် စပါး မျိုးမသန့်၍ အထွက်နှုန်း ထိခိုက်မှုကြောင့် နစ်နာမှု အတွက်တောင်သူများ သတင်းစာရ??
နာမည်ကြီးများကို ခေါ်ယူခြင်းဖြင့် ငွေမဖြုန်းသင့်ဟု ရွန်းနီ အကြံပြု
စင်ကာပူမှ ပြန်လာသည့် မနော်သော့သွဲ့ထူး၏ ကျပ် ၁ဝဝဝဝ တန်အတုအမှု လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ကွင်းဆ??
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး အမှု၏ လိုပြသက်သေ တစ်ဦး ဖြစ်သူ တပ်ကြပ်ကြီး ခင်မောင်လင်းကို ရဲတပ်ဖ?
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဘန်ကာကင်းရုံအတွင်း မိမိကိုယ်ကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သေဆုံး
စပါးအသင်းရဲ့ ၀ှက်ဖဲတစ်ချပ် (သို့) ဆွန်ဟောင်မင်
တရုတ်နိုင်ငံ တယ်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲ သတင်းမီဒီယာမှ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ စာအုပ်နှင့် စီဒ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် နေ့စဉ် လေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်နေ